ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » ဆေးညွှန်းချစ်စနိုးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: သြဂုတ်. 12 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
နီးပါးငါးနှစ်အန္သိုးသငယ်, 36, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အတူရုန်းကန်ခဲ့သည်. သူမသည်ဆရာဝန်များကမှအကူအညီကြိုးစားနေခဲ့သည်, အမျိုးမျိုးသောဆေးညွှန်းခေါ်ဆောင်ကောင်တာဆေးဝါးများကျော်, ဗီတာမင်, ရှိသမျှကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းသည့်သဘာဝကုထုံးများနှင့်တစ်ခုခင်းကျင်း. ဖြစ်ကောင်းသူမ၏စိတ်ကျရောဂါကိုတိုက်ဖျက်ဖို့အများဆုံးကြိုဆိုကြောင်းနှင့်ထိရောက်သော Antidote အဘယ်အရာကိုခဲ့ပြီ, သို့သော်, တစ်ဦးလျစ်လျူရှု၏ပုံစံအတွက်အခွင့်အလမ်းအားဖြင့်သူမ၏ဆီသို့ရောက် လာ. ,, သူ Mike အမည်ဖြင့်မှည့ခုနစ်ခုနှစ်အရွယ်နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာ. နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာကယ်ဆယ်ရေးအုပ်စုတွင်တက်ကြွစွာသူသည်ကဗျာနဲ့၏မိတ်ဆွေတစ်အိမ်မှာသူ Mike ကိုဆောင်ခဲ့လျက်အဘို့အစောင့်ရှောက်ဖို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းအန္. “ဒါဟာတစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ဖို့ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်,” သူမရှင်းပြထားသည်, “အချိန်များတွင်အိမ်လာရန်ခက်ခဲ. ငါ့ကိုအရင်ဆိုင်နေရတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာသန့်ရှင်းရေးခဲ့သည်, ရုပ်သံ, ကွန်ပျူတာကို, တယ်လီဖုန်း; အဘယ်သူမျှမကအခြားသတ္တဝါ. သူ Mike ကပြောင်းလဲသွားပြီ. အိမ်ပြန် လာ. အကြှနျုပျအဘို့အစောင့်ဆိုင်းဖို့ကောင်းတဲ့Itís. ငါ့အတန်းဖော်တစ်ဦးကပင်ငါ့ကိုပြောသည်
ငါသည်ငါ၏သဘောထားပြောင်းလဲသူ Mike ထပြီးနောက်အချိန်တိုတို. ကျွန်မပျော်ရွှင်ပုံရသည်။”
သုတေသီများသည်အန္နနှင့်တူသောအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်များကိုအားလုံးတလျှောက်အမည်ခံအရာကိုကူညီပံ့ပိုးရန်မည်သည့်တရားဝင်ဆေးကုသသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်ဖြစ်စေမဆုံးဖြတ်ရန်လုပ်ဆောင်နေကြပါသည်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတို့သည်မိမိတို့အသက်တာ၌တစ်ဦးအပြုသဘောခြားနားချက်စေ. မကြာသေးမီနှစ်များတွင်လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောတယောက်တည်းသာအသက်ရှင်နေထိုင်သောသူကဲ့သို့လူအုပ်စုများနှင့်အတူပြုပါပြီ, သက်ကြီးရွယ်အို, ပင်ဇနီးမောင်နှံများအတွက်အဘယ်သို့သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကြည့်ဖို့, ရှိလျှင်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ပိုင်ဆိုင်မှရရှိခဲ့ကြသည်. ဒီလေ့လာမှုတွေအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှာရှာဖွေထည့်သွင်းပါပြီ.
ကရင်သည် Allen, ဆေးပညာဦးစီးဌာနထံမှသုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်, ကျွဲမှာနယူးယောက်ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလူသားများအပေါ်ရှိသည်ဇီဝကမ္မအကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်သုတေသနတွင်အထူး. ပါဝင်ပတ်သက်သူမ၏လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ 48 stockbrokers, အဘယ်သူကိုအားလုံး ACE အား inhibitors နဲ့ကုသခံရခဲ့သည်, မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားတွေအတွက်ဆေးဝါး. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ်ဦးတည်းနေထိုင်ခဲ့နှင့်ကြိုတင်လေ့လာမှုအနည်းဆုံးငါးနှစ်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များပိုင်ဆိုင်သောမပြောစဖူး. Allen အားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်အလိုဆန္ဒစွဲသောသူကို ရွေးချယ်.. 'ငါဒီလိုတာဝန်ရှိလူတွေသေချာစေရန်ချင်တယ်,’ သူမကပြောပါတယ်. သူမလည်းသူတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်သောအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့များ၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်လျှင်သူတို့တစ်ဦးစီမှာသူတို့ဘဝထဲသို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကြိုဆိုမည်ဟုသေချာဖန်ဆင်းတော်. လေ့လာမှုစတင်ချိန်တွင်, ကိုသင်တန်းသားများ၏ထက်ဝက်ကိုကျပန်းမှာရွေးချယ်တဲ့ခွေးသို့မဟုတ်ကြောင်၏သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆည်းပူးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြ. ခြောက်လအတွင်းရဲ့အဆုံးမှာ, ထိုလူအပေါင်းတို့သည် ACE အား inhibitors ကိုလက်ခံရရှိလာကြသောအခါ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်-ပိုင်ဆိုင်အုပ်စုရှိသူများကလူအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမရှိသူတွေထက်စိတ်ဖိစီးမှုကြိမ်အတွင်းသိသိသာသာပိုပြီးတည်ငြိမ်ကျန်ရစ်. သူတို့ကမဟုတ်တဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပိုင်ရှင်အုပ်စုထက်သွေးဖိအားနဲ့နှလုံးခုန်နှုန်းဟာတိုးပွားလာနည်းပြသ. လေ့လာမှုပြီးစီးပြီးနောက်, နှင့်သင်တန်းသားများရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်, သည် Allen ကပြောပါတယ်, '' သူတို့ကတိရိစ္ဆာန်များကိုစောင့်ရှောက်, နှင့်တကယ်တော့, လူများတို့သည်အနည်းဆုံးတဝက် [ဤလေ့လာမှုတွင်] အဘယ်သူသည်ထွက် သွား. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရင်းမူးယစ်ဆေးတယ်။’
“ကျွန်တော်တို့ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီထင်ရသောသူတယောက်စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိချက်,” Allen အားထုတ်ထောက်ပြခဲ့သည်, “အနည်းဆုံးလူမှုရေးအဆက်အသွယ်ရှိသည်တဲ့သူတွေအများဆုံးအကျိုးခံစားရဖို့ဟန်ရှိကြောင်း. ကျနော်တို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များလူမှုရေးအထောက်အပံ့တစ်ခုအချို့သောအမျိုးအစားအစားထိုးကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။” သူမနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုအမျိုးသမီးများပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့အစောပိုင်းကသုတေသနစီမံကိန်း, တစ်ဦးတည်းအသက်ရှင်ခဲ့သူ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်နှင့်အတူ. သူမသည်သူတို့ပိုပြီး Active ဖြစ်နှင့်မျှမတို့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူတစ်ဦးတည်းနေထိုင်သောအခြားသက်ကြီးရွယ်အိုများအမျိုးသမီးများထက်နိမ့်သွေးဖိအားရှိသည်တတ်ကြတာကိုတွေ့ရှိ. အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအထူးဂရုနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းတောင်းဆိုကြသောကြောင့်, မကြာခဏဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များမလုပ်ခဲ့ဘူးသောသူတို့များထက်သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေပိုပြီးတက်တက်ကြွကြွကို. ထို့အပြင်, ဒီတိုးချဲ့လုပ်ဆောင်မှုထိုကဲ့သို့သောလျော့နည်းစိတ်ကျရောဂါနှင့်စိုးရိမ်စရာအဖြစ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများသို့ဘာသာပြန်, တိုးပွားလူမှုအပြုအမူ, တစ်ဦးတည်းသောငါတို့၏ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေခြင်းငှါသက်သေပြချက်ခဲ့သည်.
ဒါကြောင့်, သင်ကအမိုးအကာမှထွက်အဆောတလျင်သင့်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန် Fido ချမှတ်? အားလုံးမူတည်ကြောင်း. Allen သည်အဆိုအရ, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များရှိခြင်းကနေအများဆုံးအကျိုးခံစားရသူတွေကလူတွေမိသားစုဝင်တစ်သက်ဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တိရစ္ဆာန်တွေကိုကြည့်ရှုသောသူဖြစ်ကြ၏. သင်သည်အန္သော်လည်းစဉ်းစားစေခြင်းငှါ,, အဘယ်သူသည်သူမ၏ခွေးကိုတစ်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေနှင့် Pseudo ကုထုံးကိုရှာတွေ့ပြီ, သူ Mike. “သူသည်အလွန်ချစ်ခင်ဖြစ်ပါသည်,” အန္နကပြောပါတယ်. “miki သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့အညိုရောင်မျက်လုံးတို့နှင့်အတူငါ့ကိုလာူငါစိတ်ဓာတ်ကျတာပါသည့်အခါထရန်ငါ့အားဖိအားပေးနေခြင်း. သူမိမိအသက်ကိုကယ်ဆယ်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုပြင်ပကြကုန်အံ့ငှါငါ့ကိုတောင်းဆိုနေတာသည့်အခါက hard ပေမယ်သူလည်းကျွန်မဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာတွေကိုဂရုစိုက်ဖို့ဟန်. ယခုငါပြုစုပျိုးထောင်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်။” သို့သော်အမှန်တရားဖြစ်တယ်, အန္နနှင့်က Mike နှစ်ခုလုံးပြုစုပျိုးထောင်ဖို့တစ်စုံတစ်ဦးရှိသည်.